Changzhou Kaiguan Packaging & Technology Co, Ltd.
KAIGUAN-Kuvavha chigadzirwa chigadzirwa
Makore gumi nemaviri echiitiko muindasitiri yekupakata indasitiri
Yakagadziriswa maitiro ekugona kugona kwako chaiwo indasitiri yekushandisa
Isu tinotora matekinoroji epamberi munyika, anoshandisa zvekuchengetedza zvakatipoteredza zvinhu, anovandudza iyo yekugadzira tekinoroji yezvitsva kuchengetedza kwezvakatipoteredza kurongedza zvigadzirwa.
Yedu hombe yekupakira zvigadzirwa ndeye cheertainer (yakamira bhegi mubhokisi), ldpe cubitainer, inodonha mudziyo wemvura, semi-kupeta jeri inogona uye yekuzadza michina.
Sezvo yedu nyowani kurongedza chigadzirwa, cheertainer bhegi rakagadzirwa multilayer plastiki. Iyo yekunze layer (polyamide + polyethylene) inodzivirira kubva kuoksijeni uye unyoro; kuwanda kwayo uye kuumbwa kwayo kunogona kusiyana zvichienderana nezvinodiwa nemutengi kana chigadzirwa. Iyo yemukati layer (polyethylene) yakasununguka uye inopokana nekubvaruka. Iyo flatpack imwe nzira kune echinyakare emvura kurongedza, ichipa iwo mabhenefiti eyakaomarara mudziyo uye inotsiga kuenderera maererano nezve zvekufambisa uye zvekuchengetedza zvinodiwa. Ichachengetedza inosvika pamakumi masere kusvika mapfumbamwe ezviuru muzana mudura rekuchengetera pamwe nekuderedzwa kwakafanana pamitengo yemukati yekutakura uye kuchengetedza muEC2 emissions.
Bhokisi iri tsika yakagadzirirwa. Sezvo zvaigadzirwa nemakadhibhokisi, mativi ese anogona kudhindwa, iyo inopa yakakura nzvimbo yekutaurirana pamusoro penzvimbo.
Kambani yedu ine yakasimba kudzora pane ese maratidziro ehunhu hwechigadzirwa kubva pakutanga chaipo. isu tinoteedzera kwenguva refu uye yakadzikama hukama hwekushandira pamwe nevatengi, zvipire kuedza kuita kuti kambani iwane kusimudzira kwenguva refu.
Nemaonero akavhurika uye echokwadi, tinotarisira shamwari dzese kuti dzive nekutaurirana nekuferefeta mukambani medu, zvichipa ruzivo rwavanoda nekuvabatsira kugadzirisa matambudziko ekugadzira.
Isu tinotarisira kutanga kubatana kwenguva refu nevashandisi vese remangwana rakanaka！
Sarudza Kaiguan, sarudza mhando!
Kaiguan-akabudirira kutora chikamu mukuratidzira!
Zvinotaurwa nevatengi vedu？
Mutengi 'kudiwa uye zano ndiro redu rekutyaira, kugutsikana kwevatengi ndiko kutsvaga kwedu.
Isu tave kutarisira kusangana kukuru nevatengi vekunze kwenyika zvinoenderana nekubatsirana.